Ukuthengisa nge-imeyile ngamanani | Martech Zone
Ukuthengisa nge-imeyile ngamanani
NgoMgqibelo, Matshi 10, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 20, 2018 Douglas Karr
Umhlobo wam olungileyo, UChris Baggott, Sele eza kukhupha incwadi yakhe yokuqala, ukuthengisa nge-imeyile ngamanani. UChris ubhale incwadi nge Ukuthengisa kuka-Ali, omnye umhlobo wam.
UChris liqabane elisekwe kwi NgqoThagethi, inkampani endisebenza kuyo njengoMphathi weMveliso. Ibhlog kaChris (kunye nezinye iinkokheli ezimnandi kunye nabasebenzi) batyhale i-ExactTarget kwi-stratosphere - igama lenye yeenkampani ezingama-500 ezikhula ngokukhawuleza kwilizwe.
Ayisiyonto yovuyo kuphela ekusebenzeni noChris kwi-ExactTarget, ndikwenza incwadi yakhe-ndithetha ngoomatshini kunye nokudityaniswa. Ndijonge phambili ekufundeni le ncwadi kunye novuyo lokuzibona ndishicilelwe! Ndibhalele kwaye bendikwimagazini, kodwa andizange ndibhale ncwadi. Kuyandityhala ukuba ndiqale ukuzibhala, ndinamaphepha angama-75 kwinto endiyifundileyo kunyaka wam wokuqala wokubhloga. Ndidinga ukubuyela kuyo, nangona!
UChris ukwazisa inkampani yakhe elandelayo, Isoftware yokuGqibela. Ndonwabe ngokusebenza noChris kwesi siqalo ngokunjalo-sichithe okuninzi ngorhatya sithetha ngelishwa elinzima lokubhloga indawo yomsebenzisi kunye nokungakwazi kwabafundi ukuba bakwazi ukufumana umxholo ngokulula. Uza kubona i-Compendium kwimephu kungekudala yenza loo nto! Andifuni ukukhupha kakhulu engxoweni kuyo, kodwa ndonwabile ukubona umbono kaChris ufezekiswa NgqoThagethi uyenzile. UChris usebenza kwiCompendium ngokusisigxina ngoku. Ndinonyana oya ekholejini, ke kuye kwafuneka ndikhethe indlela ekhuselekileyo kwaye ndinamathele kwinkampani eqhumayo!
Hlela kwangaphambili ikopi yakho yeNtengiso ye-imeyile ngamanani! I-imeyile iseyitekhnoloji engakholelekiyo ethembisa ngakumbi. Ngokungafaniyo nayiphi na enye itekhnoloji, i-imeyile esekwe kwimvume isephambili kwintengiso 'yokutyhala'. Oko kukuthi, undinike imvume yokunxibelelana nawe, kwaye ndiyakwazi ukulutyhalela kuwe xa ndifuna njalo. Umabonakude, unomathotholo, amaphephandaba, uShishino isenokuxhomekeka kakhulu kumthengi, kumxhasi okanye kulindelwe 'kulungiselelwe'. I-imeyile ikhule yaba yinxalenye yobomi bemihla ngemihla kuthi (andazi ukuba ndenze ntoni ngaphambi kwe-imeyile!) Kwaye ndiza kuqhubeka ndihlala ndinjalo.
Andikwazi kulinda ukufumana ikopi yencwadi! Kwaye kungcono ukuba ubhalwe ngokuzenzekelayo, Chris!
tags: chris baggottemail Marketingincwadi yentengiso ye-imeyileukuthengisa nge-imeyile ngamanani
Isikhundla seTekhnoloji yePlagi yePlagi 2 ekhutshiweyo!
Mar 26, 2007 ngo 2:17 PM
Ndiyifumene indawo yakho ngokukhangela le ncwadi; Kubonakala ngathi kufanelekile ukujonga.
Mar 26, 2007 ngo 6:15 PM
Ndiyathemba njalo! UChris ungumfo omkhulu kwaye unguMvangeli we-imeyile oye wafaka amandla e-imeyile kwihlabathi liphela kule minyaka mihlanu idlulileyo. Ingcebiso yakhe iyangqinwa kwaye iphambili. I-imeyile ijongwa kancinane njengobuchwephesha “bezolo” kodwa akunjalo. Abathengisi bafumana ukuhlanganiswa kwe-imeyile, amaphepha okufika, okubangela ukuthunyelwa, njl njl.
Epreli 11, 2007 ngo-2: 10 PM
Ndiyavuma. Ungaze uwajongele phantsi amandla e-imeyile ebekwe kakuhle kukhetho oluphindwe kabini kubhaliso.
Epreli 27, 2007 ngo-8: 49 AM
YINCWADI enkulu kwaye i-buzz iqalile ukuyijikeleza kwisangqa sethu e-Atlanta. UDoug, kulungile ukufumana ibhlog yakho kunye neminqweno emihle kuwe, uChris kunye neenkokheli zokucinga kwiThagethi ngqo kunye nesiQinisekiso. Buyela eAtlanta kwaye ube ne-steak nam ngelinye ixesha! UScott
Epreli 27, 2007 ngo-9: 20 AM
Kuhle ukuva kuwe kwaye ndiyavuya undifumene! Ndijonge ukuhlangana nawe kwakhona kungekudala.
Yabantu abangaziyo: Ingcaciso 6 ngomnye woovulindlela bokusebenzisa ubuchwephesha kwezentengiso. Ukuba bekukho inkampani enye endikhe ndasebenza nayo eqonda intengiso enqamlezayo, oomatshini abazihambelayo, kunye nokukwazi ukuphakamisa amandla nganye, yingcaciso6.
UScott kunye neqela ziinkokeli ezicinga ngokupheleleyo kolu shishino. Ndonwabe ngokuya kwisidlo sangokuhlwa noMichael Kogon (CEO) kunye noScott ngobunye ubusuku kwaye yayiphefumla umoya omtsha. Ndiphume ndaya eAtlanta kwi-buzz, ndiphila ngemibono kwaye ndinemincili yokubuyela ekuphuculeni imveliso yethu.
UMicrosoft uye waqaphela inkcazo6 ngokuphindaphindiweyo ngenxa yobuchule kunye nobuchule babo. Liqela elimangalisayo! Xa sijonga 'kwiArhente yeXesha elizayo', ndicinga ukuba i-Definition6 sele ingumzekelo obalaseleyo!
Enkosi ngokuma kwaye undazise ukuba ulapha, Scott!